अझै रिस उठाएको भए तारै-तार हिँडेर काठमाडौं आइदिन्थें – Ramailo Sandesh
मैले धर्ती नै छाड्न खोजेको हो । आफ्नै घाँटी रे:ट्न सकिएन । आँखामा परेको कसिं’गर पनि आफैँ झिक्न सकिन्न, साथी चाहिन्छ,’ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित नवजीवन परोपकार समाजमा पुग्दा माइला बिक अर्थात् हिम’बहादुर सुनारले मनको बिर:ह पोखे ।
४२ वर्षीय माइला तिनै व्यक्ति हुन्, जसले शनि’वार दिनभर नुवाकोटमा बिजुलीको तारमा बसेर सिंगो राज्यलाई नै हैरान बनाएका थिए । अहिले उनी नवजीवन परो:पकार समाजको संरक्षणमा छन् ।साँझ हेलि’कप्टरसहित पुगेको नेपाली सेनाको विशेष टोलीले उ’द्धार गरेपछि प्रहरीले उनलाई त्यहाँ ल्याएर संस्थाको संरक्षणमा छाडेको हो ।
आइत’वार दिउँसो भेट्न पुग्दा हिम’बहादुरले मर्न सजिलो रहेन छ भन्ने निष्कर्ष सुनाए– ‘भाग्यमा छैन भने त यत्तिकै मर्न पनि पाइँदैन । अनि दिन आएपछि जान्नँ भन्न पाइँदैन, जानैपर्छ ।’पारि’वारिक तनावले बिजुली’को पोलमा चढेको उनको भनाइ छ ।कसरी चढियो त बिजुलीको पोलमा ? प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै उनले ठट्यौली शै’लीमा गम्भीर कुरा सुनाए ।
‘अब सिधै माथि जाने भनेर खम्बा’मा गएर पहिले ढोगें । हे ईश्वर ! अब तिमी र म सँगै बस्ने ल भनेर विस्तारै माथि चढ्दै’चढ्दै गएँ । माथि ग’एपछि त कोही माइल्दाइ भन्न थाले, कसैले ओइ काले तल झर भन्न थाले । मलाई रिस उठ्दै गए’पछि ल आइज न त भनेर अझै माथि गएँ । जेहोस्, सप्लाइ भो । मनको चाह’ना सप्लाइ भो,’ उनले भने ।
माथि गइसके’पछि आफू’लाई तल आउनै मन नलागेको उनले बताए ।ढोग्दा क’रेन्ट लागेन । यसो सोचें, यो ख’तरा क’रेन्ट भन्या छ, बीचतिर गएर बस्छु । त्यहाँ बस्यो भने कोही पनि आउँ’दैन भन्ने लाग्यो । सुइँ’सुइँ माथि गएँ, अझै क’रेन्ट लागेन । माथि गए:पछि तल आउन मन लागेन ।’उनले थपे, ‘माथि उड्न सजिलो हुने रहेछ, तल गाह्रो । त्यहाँ त काँडाले पनि नघोच्ने, सुइँ’सुइँ लठ्ठा तान्यो, कस्तो मज्जा !’
आफू`लाई अझै रिस उठाएको भए तारै`तार हिँडेर काठमाडौं आइदिन्थें भन्ने गफ पनि उनले दिए ।उनको मानसिक स्वास्थ्य जाँचका लागि सोमवार पाटनस्थित मान`सिक अस्प`ताल लैजाने तयारी भएको संस्था`की सचिव शान्ति तिवारीले लोकान्तरसँग बताइन् ।